Virtual Hofisi Inoshanya Zvino Inowanikwa kuPrairie Cardiovascular - DZIDZA ZVIMWE
Masks ekumeso anodiwa pakugadzwa kwako
Rangarira kuunza mask kumeso pakugadzwa kwako!
Masks achiri kudiwa munzvimbo dzese dzePrairie Moyo muIllinois.
Researched. Proven. Mutungamiriri.
The #1 heart attack nyanzvi.
Usatambure chirwere chetsinga pasina!
Tora iyo Vein Health Assessment
Kupfuura Mwoyo Wako.
Virtual Hofisi Inoshanya Zvino Inowanikwa kuPrairie Cardiovascular
Munguva yeCCIDID-19 dambudziko, Prairie Cardiovascular inofara kupa zuva rimwe chete uye rinotevera kushanya chaiko kuitira kuchengetedza uye kurerutsira varwere vedu.
Kuronga nguva yekusangana, ndapota fona
Tsvaga Chiremba wePrairie
Tsvaga Prairie Moyo Chiremba Zvino
Tsvaga Chiremba Wako
Zuva Rimwechete uye Zuva Rinotevera Appointments Anowanikwa
Vatungamiriri Mumoyo Kuchengeta
Paunenge uchida kupfuura chiremba, kana iwe uchida nyanzvi yemoyo, Prairie Moyo ine mhinduro. Kubva pahigh cholesterol kusvika kuhigh blood pressure, aneurysms kusvika kuarrhythmia, kurwadziwa muchipfuva kusvika pakuchengetwa kwemoyo, nyanzvi dzePrairie Heart dzakagadzirira kumira padivi pako parwendo rwako rwekuenda kumoyo une hutano.
RATIDZA KUGADZWA KWAKO IZVOZVI
Zadza fomu riri pazasi.
Prairie Cardiovascular mutungamiri wenyika mukupa hutano hwepamusoro-soro, moyo-we-iyo-art uye vascular care. Kuita nguva yekusangana nevarapi vedu vepasi rose uye maAPC hazvigone kuve nyore.
Kuburikidza nesu ACCESS Prairie chirongwa, chikumbiro chako chekusangana chinotumirwa zvakachengeteka kuchikwata chedu chevanamukoti vakadzidziswa zvemoyo. Ivo vanokupa iwe rubatsiro rwemunhu mukuita nguva yekusangana naChiremba uye APC inonyatsokodzera kurapa moyo wako wega uye vascular zvinodiwa.
Mushure mekuzadza fomu, e-mail yakachengeteka inotumirwa kuchikwata chedu che ACCESS Prairie vanamukoti. Iwe uchagamuchira runhare rwekudzoka mukati me2 bhizinesi mazuva.
Kana iwe uchinzwa kuti iyi injodzi, ndapota fonera 911.
Nekuzadza fomu, unobvuma kugamuchira kutaurirana kubva kuna Prairie Moyo.
Ndiri murwere mutsva.
Zipi kodhi *
Zuva rekuzvarwa * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Anodiwa Chiremba uye APC (optional)
Inofarira nzvimbo (iwe sarudzo)
Chikonzero chauri kukumbira kusangana *
Kana uchida kutaura nomumwe munhu zvakananga, mukoti anogona kusvikwa nokufona 217-757-6120.
Nyaya dzinotikurudzira. Nhau dzinotibatsira kuti tinzwe pfungwa yekubatana nevamwe. Nyaya chikamu chechimwe chinhu chikuru kupfuura isu. Pamwoyo yavo, nyaya dzinotibatsira kuporesa. Tinokoka munhu wese kuti averenge nyaya dziri pazasi uye kukurudzira varwere vedu nemhuri dzavo kuti vagovane yavo yega nyaya yePrairie.
Kuona vhidhiyo yePace, kudzidza zvakawanda kana kukumbira Maoko Chete CPR musangano munharaunda yako, ndapota bhatani riri pazasi.
New job jitters are normal. Asi fungidzira uchitanga basa idzva ne pacemaker nyowani - yekutanga kuUnited States uye yechipiri pasi rose kuiswa pachishandiswa tekinoroji yekuferefeta kurapa zvine njodzi kumhanya kwemoyo. [...]
Aortic Valve Inotsiva
Ndaida kumbotora kanguva ndoti TENDA kune TAVR team!!! Vakanga vakatanhamara pamatanho akawanda! Zvakatanga muna Kubvumbi 2013. Tezvara vangu vakanaka, Billy V. Williams, vaifenda uye vakazoudzwa kuti zvaiva nechokuita nemoyo wavo. Mushure mekuedzwa kwakawanda, sarudzo dzaive […]
Ndakarasikirwa nababa vangu musi wa4 Kukadzi, 2017, kwangosara mazuva mashanu kuti vasvike makore makumi masere nemapfumbamwe ekuzvarwa. Ndichiri mudiki ndaigara ndichiona baba vangu sevasingakundiki. Aive mudziviriri wangu, murairidzi wehupenyu hwangu, gamba rangu !! Semunhu mukuru, ndakaona kuti anogona kunge asiri nguva dzose asi ndaiziva chero aifamba izvi […]
Isu Tiri Vagadziri
Chinhu chekupedzisira chaunoda kuvhiyiwa kunoda nguva yakareba yekupora. PaPrairie Mwoyo, isu tinoshanda mukuvhiya kwekuvandudza, kushoma kusingaite kuti basa riitwe chete, asi zvakare kukuita kuti udzokere pakuva iwe nekukurumidza kupfuura maitiro echinyakare.
Dzidza Zvakawanda uye Tora Mabikirwo
Kana urikusangana nezviratidzo zvechirwere chemoyo, Dial Usatyaira.
Ndapota fonera 911 uye mirira rubatsiro.
Gore rino chete, 1.2 miriyoni vekuAmerica vachatambura nemoyo wekukurumidzira. Zvinosuruvarisa, chikamu chimwe muzvitatu chevarwere ava vachafa vasati vasvika kuchipatara nechikonzero chimwe chakakosha - kunonoka kuwana kurapwa kwakakosha.
KANA KURUDZIRA KWECHIFUVA, IVA SMART – GARA UCHIDA, USAFANIRA KUDYA.
Varwere vakawandisa vane chirwere chemoyo vanozvityaira kana kuita kuti nhengo yemhuri ivatyaire kuchipatara. Ndinotenda, kune nzira yekubatsira kuderedza idzi nhamba dzinoparadza. "Inguva Yenguva" chirongwa chakagadzirwa neChest Pain Network yePrairie Heart Institute yeIllinois (PHII), inobatanidza zvipatara uye masangano eEMS kuitira kukurumidza uye zvakanakisisa kutarisira varwere vanorwadziwa muchipfuva. Gara uchifonera 911 kuti uwane rubatsiro rwekurapa - usambozvityaira - kana zviratidzo zveyambiro yemoyo zvikaitika.
Kana uchinge waona zviratidzo zvechirwere chemoyo, sekondi yega yega yaunochengeta inogona kureva mutsauko pakati pekukuvadzwa kwemoyo kusingagadzirike kana mamiriro anorapika, uye kunyangwe hupenyu kana rufu. Nekufona 911 kutanga, kurapwa kunotanga nguva apo vanopindura zvechimbichimbi vanosvika. EMS nyanzvi uye vamwe vekutanga vanopindura vanogona:
Ongorora mamiriro ako nekukurumidza
Pakarepo tumira kukosha kwako uye ruzivo rweEKG kune chero chipatara mukati meThe PHII Chest Pain Network
Gadzirisa kurapwa muamburenzi
Ita shuwa kuti timu yemoyo yechipatara ichamirira uye yakagadzirira kusvika kwako
Zvinonyatso mhanyisa nguva kubva pachiratidzo chekurwadziwa kwemoyo kusvika pakurapwa
Mazano Ekugadzirira Kwekushanya Kwako
Iva nechokwadi chokuti Tine Zvinyorwa Zvako Zvokurapa
Kana chiremba wako wega akakuendesa kuPrairie Cardiovascular, iye / iye angangotibata nefoni kana kutumira marekodhi ako kuhofisi yedu. Zvakakosha kuti tigamuchire zvinyorwa zvako zvekurapwa. Zvikasadaro, chiremba wako wemwoyo haazokwanisi kukuongorora zvakakwana uye zvingave zvakakosha kuti udzokorore kugadzwa kwako kusvika marekodhi aya agamuchirwa. Kana iwe wazvitaurira iwe pachako, unofanirwa kubata chiremba wako uye kuronga kuti zvinyorwa zvako zvitumirwe kuhofisi yedu usati washanyira. Nhoroondo yako yekare yezvehutano yakakosha mukuongororwa uye kurapwa.
Hunza Ruzivo Rwako rweInishuwarenzi uye Rezinesi Yako Yekutyaira
Paunenge uchiita musangano nesu, iwe unozokumbirwa ruzivo rweinishuwarenzi yako iyo inozosimbiswa nesu usati wagadzwa. Iwe unofanirwa kuunza kadhi rako reinishuwarenzi uye rezinesi rako rekutyaira kune yako yekutanga kusangana. Iwe unogona kuziva zvimwe nezve yedu marongero emari nekufonera Patient Finance department.
Huya neMishonga Yako Yese
Ndokumbira uuye nemishonga yako yese mumidziyo yavo yekutanga paunouya kuhofisi. Iva nechokwadi chokuti chiremba wako anoziva nezvemishonga yose yauri kutora, kusanganisira pamusoro-the-counter zvinodhaka uye mishonga yemakwenzi zvakare. Mumwe mushonga unogona kudyidzana nemumwe, dzimwe nguva uchigadzira matambudziko akakomba ekurapa. Unogona kuwana fomu riri nyore kunyora ese emishonga yako pano.
Zadza Mafomu Matsva Eruzivo rwemurwere
Ruzivo urwu rwakakosha zvikuru uye runokurumidzisa hurongwa kana wasvika kuhofisi. Makopi emafomu ako anogona kuwanikwa pazasi. Munokwanisa kufekisisa mafomu kuhofisi yedu pachine nguva pa833-776-3635. Kana musingakwanise kudhinda mafomu, ndapota fonera hofisi yedu panhamba dzinoti 217-788-0706 uye kumbira kuti mafomu atumirwe kwauri. Kuzadza/kana kuona mafomu usati wagadzwa kunokuchengetedza nguva.
Chinyorwa Chekuita Zvisina Kuita
Kuongorora Kwako: Zvekutarisira
Mushure mekunge mazadza kunyoreswa kwenyu uye munyoresi ane ruzivo rwenyu rwakakosha uye ruzivo rweinishuwarenzi, mukoti achakudzoserai kukamuri rebvunzo kwaanozotora BP yenyu nekurova.
Mukoti achatorawo nhoroondo yako yezvekurapa kuti aone kwete chete kuti ndeipi mishonga yauri kutora asi kuti chii, kana chiripo, allergies yaungave uine; rudzii rwezvirwere zvekare kana kukuvara kwaungave wakatambura; uye chero kuvhiyiwa kana kugara muchipatara kwaungave wakaita.
Iwe zvakare uchabvunzwa nezve hutano hwemhuri yako kusanganisira chero mamiriro enhaka angave ane chekuita nehutano hwemoyo wako. Chekupedzisira, unozobvunzwa nezve muchato wako, basa uye kana usingashandisi fodya, doro kana chero zvinodhaka. Zvinogona kubatsira kunyora pasi zviitiko zvako zvese zvekurapwa nemazuva uye wouya nazvo izvi kushanya kwako.
Kana mukoti apedza, chiremba wemwoyo anosangana newe kuti aongorore nhoroondo yako yezvekurapa uye kuvheneka muviri. Mushure mebvunzo, iye achakurukura zvaawana newe nemhuri yako uye nekukurudzira kumwezve kuongororwa kana zvirongwa zvekurapa. Ndapota inzwa wakasununguka kubvunza chiremba wemwoyo chero mibvunzo yaungave uine panguva ino. Vanachiremba vedu vanoshandisa Vana Chiremba Vabatsiri uye Vanamukoti vakanyatso dzidziswa manejimendi emwoyo kuona varwere pane dzimwe nguva. Kana zvakadaro, kushanya kwako kunozoongororwa nachiremba wako.
Chii Chinoitika Pashure Pokushanya Kwokutanga?
Mushure mekushanya kwako nachiremba wemwoyo, hofisi yedu inotumira marekodhi ese emwoyo, mhinduro dzebvunzo, uye mazano ekurapa kuna chiremba wako anoreva. Mune zvimwe zviitiko, tinogona kuronga mimwe miedzo yauchazoda kudzoka. Tine nhevedzano yebvunzo nemaitirwo - mazhinji acho asingapindire - pamunwe wedu izvo zvatakanga tisina kana makore gumi apfuura kutibatsira kuona matambudziko nekuagadzirisa nekukurumidza, pachine chiitiko chemoyo.
Kana muine mibvunzo, ndapota fonerai chiremba wemwoyo wako. Nekuda kwehuwandu hwedu hwekufona kwemazuva ese, kuyedza kwese kuchaitwa kudzosera foni yako nenguva. Chero nhare inogamuchirwa mushure me4:00 masikati inozowanzo kudzoserwa zuva rinotevera rebhizinesi.
General Rubatsiro Runowanikwa
Kana uine chero mibvunzo nezve kushanya kwako kuri kuuya, ndapota taura.
Kukumbira kuburitswa kwemashoko kana marekodhi
Bazi reCompliance department rinoita zvose zvikumbiro zvekuburitswa kwemashoko evarwere. Kubatsira varwere mukuwana ruzivo rwavo rwehutano hwehutano (makopi akaoma ezvinyorwa zvekurapa), varwere vanofanira kunyatsozadzisa Prairie Cardiovascular Consultants. Mvumo yekushandisa uye/kana Kuburitsa Yakachengetedzwa Ruzivo fomu.
Mafomu ese akazadzikiswa, akasainwa uye ane date Mvumo anogona kudzoserwa ku:
Attn: Dhipatimendi Rokuteerera
KANA E-mail: HIPAA2@prairieheart.com
KANA fax yakananga kuDhipatimendi Rokuteerera: 833-776-3635
Mvumo yekushandisa uye/kana Kuburitsa Ruzivo Rwakadzivirirwa
Pepa rakabvumirwa Relative Certification
Ndedzipi mari dzinobhadharwa dzinoenderana nekukumbira marekodhi ekurapwa?
PCC inodaro kwete varwere vanobhadhara, zvimwe zvivakwa zvehutano, VanaChiremba neAPC, kana Dhipatimendi reVeterans Affairs Administration (VAA) yekukumbira makopi ezvinyorwa zvevarwere.
Ndinowana sei makopi ezvinyorwa zvangu zvekurapwa?
Mvumo Yekushandisa/Kuburitsa Ruzivo Rwehutano Hwakachengetedzwa inofanira kusainwa nemurwere kana mumiriri wemurwere.
Kuti uwane Mvumo yeKushandisa / Kuburitsa Yakachengetedzwa Ruzivo rwehutano fomu tinya pano.
Ndapota tora pano kune mirairo yekuti unozadza sei Mvumo yekushandisa/Kuburitsa Ruzivo Rweutano Rwakachengetedzwa.
Kana usingakwanise kudhinda fomu, ndapota taura nesu kuburikidza neruzivo rwekufonera.
Kana mvumo yapedzwa, yakasainwa uye nemusi yagamuchirwa neDhipatimendi Rokuteerera, ruzivo rwakumbirwa rwunozotumirwa kune anenge achigamuchira.
Mvumo inopera riini?
Mvumo inopera mazuva makumi matanhatu kubva pazuva rayakasainwa. Iwe unogona kuisa rimwe zuva rakasiyana mundima yechitatu pane yechipiri peji kana iwe uchida kuti mvumo ishande kweanopfuura mazuva makumi matanhatu. Mvumo haizoshanda chero nguva yakareba kupfuura gore rimwe.
Ndekupi kwandinotumira mvumo yangu yapera?
Ndokumbira utumire zvibvumirano zvese ku:
Chenjerera: Dhipatimendi Rokuteerera
Ndeipi nhamba yefax yekutumira mvumo yangu yapera?
Ndokumbira utumire fakisi mvumo yako ku833-776-3635.
Ndingaite e-mail mvumo yangu yakapera?
Ehe. Mvumo yakapedzwa inogona kutumirwa e-mail kune HIPAA2@prairieheart.com
Chii chandinofanira kuwana kuti ndiwane marekodhi ekurapwa pamurwere akafa?
Ruzivo rwezveutano hwemufi runogona kuburitswa pachikumbiro chakanyorwa kubva kumuiti wenhaka kana mutarisiri wemidziyo yemufi kana mumiririri anenge asarudzwa nemufi.
Ko kana pasina agent yemushakabvu?
Kana pasina muiti, maneja, kana mumiririri uye munhu wacho asina kupikisa zvakananga kuburitswa kwezvinyorwa zvake zvekurapwa nekunyora ipapo ruzivo rwezveutano hwemushakabvu runogona kuburitswa pakatambira fomu rinotevera: Yakatenderwa Relative Certification fomu
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ndigamuchire zvinyorwa zvangu zvekurapwa?
Kuti usunungure rekodhi yekurapa, zvinogona kutora kusvika kumazuva makumi matatu kuti ugamuchire marekodhi ako. Tinogadzirisa zvikumbiro nehurongwa hwazvinogamuchirwa. Nekudaro, kugadzwa kuri kuuya, maitiro, uye emergency zvinogadziriswa sechikumbiro cheSTAT.
Tinogona kukwanisa kuita chikumbiro zuva rimwe chete, kupihwa vashandi uye ruzivo rwakakwana uye rwuripo. Unogona kubata Dhipatimendi reCompliance kuti uone mamiriro echikumbiro chako.
Ndiani anogadzirisa kuburitswa kwerekodhi rangu rekurapa?
Dhipatimendi reCompliance rinogadzirisa zvikumbiro zvese zvemarekodhi.
Ndinogona kusaina fomu remvumo ndotora zvinyorwa zvekurapa panguva imwe chete?
Ndokumbira utaure neDhipatimendi Rezvemitemo kuti rironge marekodhi ekurapa, nguva yekutora, uye kusaina mvumo. Dhipatimendi Rokuteerera rinozoda nguva yakawanda yekugadzirisa chikumbiro uye kuona kusunungurwa kwakakodzera kwemaitiro eruzivo rwemurwere kwapera.
Pane mumwe munhu kunze kwemurwere anogona kutora zvinyorwa zvangu zvekurapa here?
Ehe, marekodhi anogona kuburitswa kune chero munhu anotsanangurwa nemurwere pamvumo. Mufananidzo ID inodiwa paunenge uchitora zvinyorwa zvekurapa.
Ndinogona kushandisa chikumbiro chimwe chete kutumira marekodhi kunzvimbo dzakasiyana?
Kwete. Tinoda mvumo yakaparadzana yenzvimbo yega yega.
Ini ndinoda mvumo yakaparadzana kune wega PCC chiremba?
Kwete, PCC ine imwe Electronic Medical Record. Marekodhi ako ese ekurapa akaiswa mune imwe chati.
Sei mvumo ichifanirwa kunge ichinyorwa nemusi wekusaina?
Kuona mvumo yemurwere yekuburitsa ruzivo rwehutano.
Kana ndikadhawunirodha Prairie Heart Institute yeIllinois APP pafoni yangu kana piritsi kana kusaina-kunyoresa kune tsamba yako yenhau, unoshandisa sei ruzivo rwangu?
Isu hatitore chero ruzivo rwemunhu kubva kuPrairie Moyo App. Ruzivo rwaunoisa rwunochengetwa chete pafoni yako kana nharembozha uye haruna kuunganidzwa kana kuchengetwa nePrairie Cardiovascular kana Prairie Heart Institute yeIllinois neimwe nzira. Kana ukasarudza kupinda mutsamba yedu, email kero yako chete ndiyo inochengeterwa chinangwa chekukutumira tsamba yenhau. Prairie Cardiovascular uye Prairie Heart Institute yeIllinois haife yakatengesa email kero yako uye unogona kubuda chero nguva.
Dhawunirodha iyo Prairie App
Iyo Prairie Moyo Institute App inoita kuti zvive nyore kuramba wakabatana. Nekubata kwebhatani, tsvaga Prairie Mwoyo chiremba kana kuunza mafambiro kunzvimbo yePrairie Moyo iri padyo newe. Mukati meapp, iyo "MyPrairie" yedhijitari wallet kadhi chikamu chinoita kuti uchengetedze ruzivo rwese rwevanachiremba vako, mishonga yako, allergies, ruzivo rweinishuwarenzi uye kuonana kwemishonga.
Dhaunirodha Ye iPhone
Dhawunirodha Kune Android